Kuziva Sei Yako B2B Vatengi NeMuchina Kudzidza | Martech Zone
Maitiro Ekuziva Kwako B2B Vatengi NeMuchina Kudzidza
Chipiri, Kurume 31, 2020 Chipiri, Kurume 31, 2020 Emily Johnson
Makambani eB2C anoonekwa seanotungamira-mumhanyi munzira dzevatengi analytics. Nzira dzakasiyana senge e-commerce, vezvenhau vezvenhau, uye nharembozha dzakabvumidza mabhizinesi akadaro kuveza kushambadzira uye nekupa rakanakisa vatengi mabasa. Kunyanya, yakazara data uye epamberi analytics kuburikidza nemuchina kudzidza maitiro akagonesa B2C masystems kuti anyatso kuziva maitiro evatengi uye nezviitwa zvavo kuburikidza neInternet masystem.
Kudzidza kwemuchina zvakare kunopa hunyanzvi huri kubuda hwekuwana ruzivo rwevatengi vebhizinesi. Nekudaro, kutorwa nemafemu eB2B hakusati kwaenda. Kunyangwe kukura kuri kukura kwekudzidza kwemuchina, kuchine zvakawanda zvekuvhiringidzika nezve kuti zvinokwana sei mukati mekunzwisisa ikozvino B2B vatengi. Saka ngatijekesei izvo nhasi.
Muchina Kudzidza Kunzwisisa Mapatani mune Zviito zveVatengi
Isu tinoziva kuti muchina kudzidza ingori kirasi yealgorithms akagadzirirwa kutevedzera huchenjeri hwedu pasina yakajeka mirairo. Uye, iyi nzira ndiyo yepedyo nemabatiro atinoita maitiro uye kuwirirana kwakatikomberedza uye kusvika pakunzwisisa kwepamusoro.
Tsika dzeB2B nzwisiso zviitiko zvaitenderedza diki dhata senge saizi yekambani, mari, capitalization kana vashandi, uye indasitiri mhando yakarongedzwa neSIC kodhi. Asi, chakarongedzwa chakakodzera muchina wekudzidza muchina unokubatsira zvine hungwaru zvikamu zvevatengi zvinoenderana neicho chaicho-nguva ruzivo.
Inotaridza ruzivo rwakanangana nezve zvinodikanwa nevatengi, maitiro, zvido, uye maitiro maererano nezvako zvigadzirwa kana masevhisi uye inoshandisa zviono izvi kukwidziridza kushambadzira uye zviito zvekutengesa.
Muchina Kudzidza kweVatengi Dhata Chikamu
Nekushandisa muchina kudzidza pane ese mutengi dhata yatinotora kuburikidza nezviito zvavo nemawebhusaiti edu, vatengesi vanogona kukurumidza kubata nekunzwisisa kwevatengi hupenyu hwekutenga, musika mune chaiyo-nguva, kugadzira kutendeseka zvirongwa, fomu yakasarudzika uye inoenderana kutaurirana, kuwana vatsva vatengi uye chengetedza vatengi vakakosha kwenguva yakareba.
Kudzidza kwemuchina kunogonesa chikamu chemberi chakakosha kune mumwe-kune-mumwe kuita kwako. Semuenzaniso, kana yako B2B yakasimba ine chinangwa che kugadzirisa ruzivo rwevatengi uye kuwedzera kukosha kwekutaurirana kwega kwega, chidimbu chaicho che data revatengi chinogona kubata kiyi.
Nekudaro, kuti izvi zviitike, iwe unofanirwa kuchengetedza imwechete, yakachena dhatabhesi iyo yekudzidza kwemuchina inogona kushanda pairi pasina kunetseka. Nekudaro, kana uchinge uine marekodhi akachena kudaro, unogona kushandisa muchina kudzidza kudzimura vatengi zvichienderana nehunhu hwakapihwa pazasi
Zvinodiwa / chigadzirwa zvakavakirwa hunhu
Muchina Kudzidza Kurudzira Maitiro Akavakirwa paMitambo
Paunenge iwe ukakamura dhatabhesi revatengi, iwe unofanirwa kugona kusarudza zvekuita zvichibva pane iyi data. Heino muenzaniso:
Kana mamireniyamu muUS achishanyira online online grocery, achipidigura pasuru kuti aone huwandu hweshuga mune rezita rezita, obva afamba asina kutenga, kudzidza kwemuchina kunogona kuona maitiro akadaro uye kuona vatengi vese vakaita zviito izvi. Vatengesi vanogona kudzidza kubva kune chaiyo-nguva data uye voita saizvozvo.
Machine Kudzidza Kununura Izvo Zvakakodzera Zvemukati kune Vatengi
Pakutanga, kushambadzira kune vatengi veB2B kwaisanganisira kugadzira zvemukati zvinotora ruzivo rwavo rwezvinhu zvekusimudzira zvenguva yemberi. Semuenzaniso, kukumbira mutungamiri kuti uzadze fomu kurodha pasi yakasarudzika E-bhuku kana kukumbira chero chigadzirwa demo.
Kunyangwe izvo zvirimo zvaigona kutora zvinotungamira, vazhinji vashanyi vewebhusaiti vanozeza kugovana maID avo eemail kana nhamba dzenhare kungoona zvirimo. Zvinoenderana ne zvakawanikwa neThe Manifest ongororo, 81% yevanhu vakasiya fomu repamhepo uku uchizadza. Saka, haisi nzira yakavimbiswa yekugadzira zvinotungamira.
Kudzidza kwemuchina kunobvumira vatengesi veB2B kuti vatore zvinotungamira zvemhando yepamusoro kubva pawebhusaiti vasingavade kuti vapedze mafomu ekunyoresa. Semuenzaniso, kambani yeB2B inogona kushandisa muchina kudzidza kuongorora hunhu hwevashanyi webhusaiti uye kuratidza zvinonakidza zvemukati munzira yakasarudzika panguva yakakodzera otomatiki.
Vatengi veB2B vanodya zvemukati kwete chete zvinoenderana nekutenga zvinodiwa asiwo pane zvavari parwendo rwekutenga. Nekudaro, kuburitsa zvirimo pane chaiwo mutengi kudyidzana mapoinzi uye kuenzanisa zvavanoda mune chaiyo-nguva zvichakubatsira iwe kuti uwane yakanyanya nhamba yekutungamira munguva pfupi.
Muchina Kudzidza Kutarisisa kune Vatengi Kuzvishandira
Kuzvishandira-wega zvinoreva kana mushanyi / mutengi awana rutsigiro
Nechikonzero ichocho, mazhinji masangano akawedzera yavo yekuzvipira-pachavo kupa kuti vaunze zviri nani mutengi ruzivo. Kuzvishandira-wega chiitiko chinowanzo shandiswa chekushandisa muchina kudzidza. Chatbots, vese vabatsiri, uye akati wandei mamwe maAI-akasimudzwa maturusi anogona kudzidza uye kutevedzera kudyidzana senge yevatengi sevashandi mumiriri.
Yega-yekuzvishandira kunyorera inodzidza kubva pane zvakapfuura zviitiko uye kudyidzana kuita zvakanyanya kuomarara mabasa nekufamba kwenguva. Aya maturusi anogona kushanduka kubva mukuita kutaurirana kwakakosha nevashanyi vewebhusaiti kusvika mukuvandudza kudyidzana kwavo, sekutsvaga kuwirirana pakati penyaya nemhinduro yayo.
Zvakare, mamwe maturusi anoshandisa kudzidza kwakadzama kunatsiridza nguva dzose, zvichikonzera rubatsiro rwakanyanya kune vashandisi.
Kwete izvi chete, kudzidza kwemuchina kune zvimwe zvinoshandiswa. Kune vashambadziri, ndiyo kiyi chaiyo yekudzidza zvikamu zvakaomarara uye zvakakosha zvevatengi, maitiro avo, uye maitiro ekubatana nevatengi nenzira yakakodzera. Nekubatsira iwe kuti unzwisise zvinhu zvakasiyana zvevatengi, michina yekufunda tekinoroji pasina mubvunzo inogona kutora yako B2B yakasimba kuti ibudirire kubudirira.
Tags: b2bb2b vatengimutengi chiitomaitiro evatengivatengi databasevatengi nhambahupenyu hwevatengimutengi kukoshakudzidza zvakadzikamachine learningratidza kuongororakuzvishandirasic codesvese vabatsiri
Emily Johnson muchengeti wezvekutengesa ane makore gumi ane ruzivo mukuitwa kwemaitiro ekutengesa. Parizvino, anotungamira dhipatimendi rekushambadzira ku Blue Mail Midhiya, inozivikanwa B2B data solution kambani yakabva kunze kweIrving, Texas.